बादलुको घुम्टोमा भेडेटार… (तस्विरहरू सहित) - Purbeli News
बादलुको घुम्टोमा भेडेटार… (तस्विरहरू सहित)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १९, २०७४ समय: १९:४८:१२
सुनसरी / पूर्वी शहर धरानबाट अलिकति मात्रै उकालो लाग्ने हो भने त्यहाँको मौसमले चैत–बैशाखकै प्रचण्ड गर्मीलाई पनि बिर्साइदिन्छ । त्यसैले, कुनै वहाना चाहिदैन, फुर्सद हुनासाथ धरानेहरुको पहिलो गन्तव्य हो ‘भेडेटार’ । धनकुटा जिल्ला र सुनसरीको सिमानामा अवस्थित भेडेटार बजार धरानबाट मात्रै १६ किलोमिटर उत्तरमा छ । चर्को घामले शिर फुट्ला झै गरी धरान तात्तिरहदा त्यहि मास्तिरको भेडेटार भने छिनछिनमा वादलको घुम्टो ओडेर लुकामारी खेलिरहेको हुन्छ ।
चिसो महसुस गर्न त्यहाँ विजुलीबाट चल्ने पंखा वा एसी चाहिन्न । यस्तो बेला कस्को मन अडिएला धरानमा ? फुर्सद भयो कि धराने युवा हेम लिम्बू साथीसँग मोटरसाइकलमा हुइकिएर भेडेटार पुगिहाल्छन् । ‘तल(धरान)तिर असाध्यै गर्मी छ, त्यसैले गर्मी छल्न भेडेटार आइरहन्छौं’–धरान १५ का उनले भने–‘कतैबाट पाहुना, साथीभाई आउदा पनि भेडेटारको चिसो हावा नखुवाई फर्काउदैनौं ।’
उनले भनेझैं धरानेहरुको मात्रै होइन, इटहरी, विराटनगर, इनरुवातिरबाट पनि आफ्नो पाहुना एवं साथीभाईलाई घुमाउन होस् वा प्रेम जोडी, सबैको पहिलो गन्तव्य हो भेडेटार । अचेल पूर्वको भ्रमणमा आउने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरुको लागि पनि छुटाउनै नमिल्ने गन्तव्य पनि बन्दैछ । सडक एवं यातायातको सहज पहुँचले पनि सबैलाई भेडेटारले लोभ्याएको छ । आखिर किन मानिसहरु भेडेटारबाट यतिधेरै मोहित छन् त ? ‘त्यहि तल धरान हपहपी गर्मी हुन्छ, तर यहाँ बाह्रैमास चिसो हुन्छ, यहाँको मौसमलाई प्रकृतिक ए.सि.नै भनिन्छ’–होटल एशोसिएशन अफ भेडेटारका सचिव एवं होटल भेडेटार भ्युका सञ्चालक जितेन्द्र रुम्दाली भन्छन्–‘खाने बस्ने राम्रो सुविधा भएको होटलहरु र आसपासमा २,४ वटा घुम्ने स्पट पनि थपियो । यहाँ मनोरम प्राकृतिक दृष्य, हिमाल पडाड र तराईलाई यहाँबाट नियाल्न सकिन्छ ।’
समुन्द्री सतहबाट १४२० मिटर उचाईमा अवस्थित भेडेटार बजार धनकुटा जिल्लाको भेडेटार गाविसमा पर्छ । यो धनकुटा जिल्लाको प्रवेशद्धार पनि हो । धरानबाट नागवेली सडक हुदै उकालो चढ्दादेखि नै प्राकृतिक सौन्दर्यले सितलता प्रदान गर्छ, चिसो महसस हुन थाल्छ । भेडटार बजार छेउ पुगेपछि उभिएर यसो तलतिर नियाल्दा हरियाली डाँडाबीचबाट छिचोलेको नागवेली कोशी राजमार्गको सुन्दर दृष्यले मन त्यसै पुलकित हुन्छ । भेडेटार पुगिसकेपछि त्यहाँको मौसममा कफीमात्रै पिएर समय कटाउन मनले मान्दैन । त्यतिबेला तोम्बा, जाँडको निगार वा कोदोबाट बनेको लोकल रक्सीको स्वादले मन बुझाउन सकिन्छ । आफुलाई मन पर्ने खानेकुरा अर्डर बमोजिम पनि उपलब्ध हुन्छ । भेडेटार आसपासमा उत्पादन भएको ताजा फलफुल एवं तरकारी फर्कनेहरुको साथमा हुन्छ भने धनकुटा जिल्लामा मात्रै उत्पादन हुने नरिवाल बिस्कुट भेडेटारको कोसेली हुन्छ ।
भेडेटार बजारमा मात्रै मन अडिन नमाने नजिकैको शैलुङ्ग डाँडा(चाल्र्स प्वान्ट)मा बनेको भ्यु टावरमा चढेर तराई, पहाड र आकाश खुलेको बेला हिमश्रृंखलाको दृष्यवलोकन गर्दा हुन्छ । अझ फुर्सद छ भने ९ किलोमिटर तलतिर सिम्सुवा(नमस्ने) झरना पुगेर रम्न पाउदाको खुशी वयान गरी साध्यै हुन्न । भेडेटार पुगिसकेपछि अढाई किलोमिटर पूर्वको नाम्जे गाउँ र आत्मा बस्ने घर(स्प्रिट अफ प्लेस) नपुगि फर्कदा मन चुकचुकाइरहनेछ । अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनले विश्वको उत्कृष्ट १२ आंै गन्तव्यमध्ये ८ औंमा राखेपछि शुरु भएको यो गाउँको चर्चा अझै सेलाएको छैन । यसबाहेक, भेडेटार नजिकैको ऐतिहासिक साँगुरी गढी, पाथीभारा मन्दिर पनि भेडेटारको पुग्नै पर्ने गन्तव्य हो । अहिले स्थानीयको पहलमा भेडेटारमा पार्क बनेको छ भने त्यहाँ बिशेष खालको शंखेश्वर मन्दिर पनि निर्माण भइसकेपछि यहाँको आर्कषण थपिइनेछ ।
भेडेटार आउने पर्यटकहरुमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरु नै हुन् । पूर्वका विभिन्न ठाउँबाट घुम्न आउनेहरु धेरै हुन्छन् भने पोखरा, चितवनतिरबाट पूर्व घुम्न आएकाहरुले पनि अचेल भेडेटार नपुगी फर्कदैनन् । विगतमा धरानसम्म मात्रै शैक्षिक भ्रमणमा आउनेहरु अचेल भेडेटार पनि पुग्न थालेका छन् । आन्तरिकबाहेक ४० प्रतिशतजति भारतीय पर्यटकहरु आउछन् । होटल व्यावसायीरुका अनुसार विहार र पश्चिम वंगालबाट भारतीय पर्यटकहरु चिसो मौसममा रमाउन आउने गरेका छन् । पुष र माघ महिनामा मात्रै यहाँ पर्यटकहरुको चहलपहल केही कम हुन्छ । अरु बेला घुइचो लागिनै रहन्छ । पूर्वका ट्राभल एजेन्सी एवं टुर अपरेटरहरुले प्याकेजमा पर्यटकलाई घुमाउन सक्रिय नहुदा तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरुको आगमन आशा गरेअनुरुप छैन ।
तीन बर्षको दौरानमा भेडेटारमा होटल व्यावसायमा ठुलो लगानी भएको छ । पर्यटन प्रचुर सम्भावना भएर नै यहाँका होटलहरु तीन बर्षमै दोब्बार भए । स्तरीय होटल तथा लजहरु खुल्यो । तीन बर्षअघिसम्म दर्जनको हाराहारीमा होटल थियो । अहिले ३५ वटा राम्रो खान, बस्न सुविधा भएको होटल खुलिसकेको छ । यसले पर्यटकहरुलाई स्तर एवं सुविधा अनुसारका होटल उपलब्ध हुन थालेछ । यसबाहेक ५० भन्दा बढी साना होटलहरुमा खाना तथा खाजाको व्यवस्था छ । यी सबै होटल, लज तथा रेष्टुरेष्टहरुका आम्दानीको स्रोत भनेकै घुम्न आउने पर्यटकहरु हुन् । खानेपानी अभाव यहाँको पनि प्रमुख समस्या बनेको छ ।
होटलसँगै सुविधाहरु थपिएपछि अचेल एनजिओ तथा आइएनजिओका सेमिनार, गोष्ठीहरु पनि भेडेटार केन्द्रीत हुन थालेको छ । हरदम चिसो मौसम हुनु, तराई र पहाड दुवै क्षेत्रको लागि केन्द्र पनि भएकोले धरान, इटहरी, विराटनगर, इनरुवातिर केन्द्रीत सेमिनार, गोष्ठी यता सरेको हो । तराईतिर सहभागीलाई ए.सि.भएको कोठा महंगो शुल्क तिर्नुपर्छ तर भेडेटारमा प्राकृतिक ए.सि.नै पाइने हुँदा खर्चिलो पनि हुदैन । यहाँ ५ सय देखि ३ हजारसम्मका कोठा पाइन्छ । सादा खान सरदर सय रुपैया र मासुसहितको ३ सय ५० रुपैया पर्छ ।
होटलहरु थपिदा पर्यटकहरुलाई सुविधा त थपियो, तर यसले प्राकृतिक सुन्दरतालाई असर पुग्ने हो कि भन्नेमा स्थानीय एवं स्वयम होटल व्यावसायीहरु चिन्तित छन् । पहिला भेडेटार बजारमा मात्रै घर एवं होटलहरु थिए । त्यसैले भेडेटारको खाली डाँडातिर पिकनिक खान आउनेहरुको घुइचो लाग्थ्यो । अहिले ती डाँडामा निजी घर तथा ठुला होटलहरु ठडिएकोले ‘पिकनिक स्पट’ मासियो । घुम्न आउनेहरुको संख्या बढेपनि पिकनिक खान आउने समुह देखिन छोडेको छ । त्यसैले होटल एशोसिएशन अफ भेडेटारले वरीपरीका सामुदायिक वन क्षेत्रमा पिकनिक स्पट बनाउन पहल थालिसकेको छ । ‘पिकनिक स्पट बन्यो भने अन्यत्र पिकनिक खान जानेहरु यता आउछन्, वन समुहलाई आम्दानी पनि हुन्छ’–एशोसिएशनका सचिव रुम्दाली भन्छन् ।
पर्यटकहरुको बसाई लम्ब्याउन व्यावसायीहरुले हर्स राइडिङ्ग(घोडा चढ्ने) व्यवस्था गर्ने, भेडेटारबाटै साइक्लिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ र नमस्ते झरनामा क्यानोनिङ गराउनको लागि सम्बन्धित व्यावसायीहरुसँग सहकार्य थालेका छन् । निजी क्षेत्र र स्थानीयस्तरबाट प्रशस्तै प्रयास भइरहे पनि राज्यबाट भेडेटार र आसपासको पर्यटन विकास एवं प्रर्वद्धनमा ध्यान नदिदा उपलब्धी हासिल हुन नसकेको भेडेटार गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नाम्जे पर्यटन पूर्वाधार विकास समितिका उपाध्यक्ष जगत राई बताउछन् । ‘हामीले सकेसम्म पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन प्रर्वद्धनको प्रयास गरिरहेकै छौ, तर राज्यले पनि साथ दिनुपर्छ’–उनी भन्छन् । भेडेटार नजिकको कोलडाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ्गको उडान परीक्षण भइरहेपनि व्यावसायिक उडानको स्वीकृति मिलेको छैन । धरानका युवाहरु बेला बेला भेडेटार, नाम्जे हुदै डाँडाबजारतिर साइक्लिङ्गमा जान्छन् भने नमस्ते झरनामा कोर एडभेन्चर नेपालले क्यानोनिङ्गको प्याकेज शुरु गरिसकेको छ ।
टिपर र स्कुटर ठक्कर खाँदा एकको मृत्यु
उदयपुरमा ३७ उम्मेदवारको धरौटी जफत
९६ हजार नक्कली भारतीय नोटसहित एक पक्राउ
बारामा फोरमको विजय जुलुसमा गोली चल्यो, चार प्रहरी घाइते
मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते साहको मृत्यु
माेरङकाे कानेपोखरीमा दैनिक जसाे हाती आतङ्क, भागेर ज्यान बचाउन बाध्य स्थानिय
निजी खर्चमा गाउँ विकास
राशिफल / वि.सं. २०७४ मंसिर २८ गते बिहीबार
सात दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई निर्देशन
नयाँ पहिरानमा दिपिका : एकाएक तस्विर भयाे भाइरल